पेटको बोसो पगाल्ने घरेलु उपाय | नेपाली जनता :: Nepali Janta: Nepali News Portal
प्रकाशित मिति १२ बैशाख २०७५, बुधबार १७:२० लेखक नेपाली जनता
भनिन्छ आजकल स्लीमको जमाना छ । दुब्लो ज्यान देखे धेरैले रुचाउछन् । तपाई पनि यस्तै देखिन चाहानुहुन्छ होला । अझ पुटुस्स परेको पेटलाई घटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ होला । आकर्षक देखिन वा स्वस्थ रहन पेट घटाउन चाहनुहुन्छ भने पेटको बोसो पगाल्न जरुरी छ।
किनभने ठाक्टरहरुका अनुसार पेट र शरीरका अरु अंगमा बाक्लो बोसोको पत्र जम्नु स्वस्थ शरीरको लक्षण होइन। त्यस्तो मोटोपना हृदयरोग, मधुमेह, इन्सुलिन प्रतिरोध र क्यान्सरजस्ता घातक रोगको लक्षण हुनसक्छ।
खानेकुरामा नियन्त्रण र नियमित व्यायामले तपाईंको भुँडीलाई पुक्क फुलाउने बोसो घट्न सक्छ। त्यसले पनि घटेन भने मान्नुस् तपाईंको उमेर, जिन वा शरीरका् हर्मोनमा भएको गडबडी त्यसका लागि जिम्मेवार छन्।
पेटको बोसो नघट्नुका निम्न कारण हुन सक्छन्
रक्सीमा तपाईंले सोचेभन्दा धेरै क्यालोरी हुन्छ। ३५५ एमएल बियरमा १५३ र १४८ एमएल रेड वाइनमा १२५ क्यालोरी शक्ति हुन्छ। यसको अर्को खराबी भनेको, रक्सी पिएका बेला शरीरमा बोसो पगाल्ने काम बन्द हुन्छ । त्यसैले, रक्सीबाट प्राप्त क्यालोरीलाई हाम्रो शरीरले शक्तिका रूपमा सञ्चित गरेर राख्न सक्दैन। पेटमा जम्मा भएको बोसो शक्तिमा परिणत नहुने भएपछि त्यो थुप्रँदै जान्छ।
यति हुँदाहुँदै दैनिक अनुशासित रूपमा एक पेग मात्र रक्सी पिउने महिलाले वजन घटाएको पाइएको छ। त्यसका कारण भनेका उनीहरूले गर्ने दैनिक व्यायाम र अन्य स्वस्थ कार्यहरू हुन् ।
वृद्ध हुने प्रक्रिया
महिला र पुरुष वृद्ध हुँदै जाँदा शरीरमा खाद्यपदार्थलाई शक्तिमा परिणत गर्ने प्रक्रियामा गिरावट आउँछ। यसले शरीरलाई कम शक्ति चाहिएका बेला बोसो थोरै पग्लन्छ।
महिनावारि रोकिएपछि पनि महिलामा मोटोपन बढ्ने सम्भावना हुन्छ। मायो क्लिनिकका डा। माइकल जेनसेन भन्छन्, ‘महिनावारी रोकिएपछि मोटोपन बढ्यो भने त्यसको असर उनीहरूको पेटमा पर्छ।’
महिनावारी रोकिँदा महिलामा एस्ट्रोजेन र प्रोगेस्टेरोन हर्मोनको उत्पादनमा कमी आउँछ। हर्मोन उत्पादनमा आउने उक्त परिवर्तनले महिलाको वजन बढ्छ। पुरुषमा पनि उमेरसँगै टेस्टोसटेरोनको उत्पादनमा कमी आउँछ, तर उक्त हर्मोन घट्ने गति अत्यन्तै सुस्त हुन्छ।
दैनिक दौडने वा डोरी नाघ्नेजस्ता व्यायाम हाम्रो मुटुका लागि राम्रो हो। तर याद गर्नुस्, मुटुका लागि मात्र गरिने व्यायामले पेट घट्दैन। डा। किल्भ्ल्याड क्लिनिकमा कार्यरत संगीता कश्यप भन्छिन्, ‘तपाईंले मुटुको गति बढाउने र वजन घटाउने दुवै किसिमका व्यायाम गर्नुपर्छ।’
गहकिलो व्यायामले मांशपेसी बढाउँछ। त्यसका लागि शरीरले बढी बोसो खर्च गर्नुपर्छ। क्लिभल्यान्ड क्लिनिकका डा। केट पाटसनका अनुसार सजिलो र गाह्रो व्यायाम मिसाएर गर्ने हो भने साताको २५० मिनेट र गाह्रो व्यायाम मात्र गर्ने हो भने १२५ मिनेट राम्रो हो।
अत्यधिक प्रशोधित खाद्यपदार्थ सेवन
भुस छुट्टयाएर र चिनी थपेर बनाइएका खाद्यले शरीरमा ‘जलन’ गराउँछ। पाट्सन भन्छन्, ‘जलन गराउने खाद्य र पेटमा लाग्ने बोसो आपसमा सम्बन्धित कुरा हुन्। त्यसैले प्रशोधित खाद्य अत्यधिक खाँदा पेटको बोसो खर्च गर्ने क्षमतामा असर पर्छ।’
उनका अनुसार फलफूल, सागपात, भुस नछुट्इयाएका अन्नजस्ता खाद्यपदार्थमा ‘एन्टिअक्सिडेन्ट’ हुन्छ, जसमा जलनप्रतिरोधी तत्वहरू हुन्छन्। यसले पेटमा बोसो बढ्ने प्रक्रियालाई रोक्छ।
गलत बोसोको सेवन
शरीरले सबै किसिमका चिल्लो पदार्थमा पाइने तेल र बोसोप्रति एकैनासले प्रतिक्रिया जनाउँदैन। मासु र दुग्ध उत्पादनमा पाइने चिल्लोले शरीरमा बोसो बढाउने काम गर्छ।
ओलिभ आयल, एभाकाडो, सूर्यमुखी तेल, ओखर लगायतमा पाइने चिल्लो पदार्थले शरीरमा बोसो बढ्दैन। त्यस्ता पदार्थ सही मात्रामा खाए शरीर राम्रो हुन्छ। तर, अत्यधिक रूपले कुनै पनि किसिमका चिल्लोको सेवनले शरीरको वजन बढाउँछ।
पेटमा जमेको कडा बोसो पगाल्न व्यायामको मात्रा बढाउँदै लानुपर्छ। सजिला किसिमका व्यायामभन्दा कठिन व्यायाम वजन घटाउन सहयोगी हुने अध्ययनले देखाएको छ। व्यायाम प्रशिक्षक नाटालिया जिल भन्छिन्, ‘पेटको बोसो घटाउन बढीभन्दा बढी क्यालोरी खर्च गर्नुपर्छ, यसका लागि पूर्ण ताकतले व्यायाम गर्नुपर्छ।’
यसको अर्थ, तपाईंले आफ्नो शक्तिअनुसार कति समयसम्म व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो।
के लामो समय पेटको व्यायाम गरेर मात्र तपाईंले आफ्नो धेरै बोसो पगाल्न सक्नुहुन्छरु जब बोसो घटेर केही इन्च मात्र बाँकी रहन्छ, त्यस प्रकारको व्यायामले काम गर्दैन। जिलका अनुसार बोसो अत्यन्त धेरै घट्न कम्मर वरपर सबै भागमा असर पर्ने र शरीरका अन्य अंगको पनि व्यायाम गर्नु जरुरी हुन्छ।
व्यायाम गर्दा हात, खुट्टा, पछाडि पट्टिको भाग सबैतिर असर पर्ने ‘प्ल्यांक्स’ व्यायाम गर्न जिल सिफारिस गर्छिन्।
तपाईंलाई आफ्नो कुनै कामको समयसीमा, तिर्नुपर्ने बिल, बालबच्चा हेरचाहजस्ता असंख्य कामको तनाव हुनसक्छ। यही तनावले पनि तपाईंलाई वजन घटाउन गार्हो भएको हुनसक्छ। तनाव हुँदा ‘कोर्टीसोल’ नाम गरेको हर्मोन उत्पादन हुन्छ, जसले तपाईंको शरीरमा बोसो र चिल्लो कोष बढाउने गर्छ।
अनुसन्धानले कोर्टीसोलको अत्यधिक मात्रालाई शरीरमा हुने बोसो उत्पादनसँग जोडेको छ।
तपाईं ३० प्रतिशत अमेरिकीजस्तै दैनिक ६ घन्टाभन्दा कम सुत्नुहुन्छ र मोटो हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई निन्द्राको जरुरी छ। १६ वर्ष लगाएर गरिएको ७०,००० महिलाको अध्ययनअनुसार जो दैनिक ५ घन्टा वा त्योभन्दा कम सुत्छन् उनीहरु ७ घन्टा सुत्ने महिलाभन्दा ३० पाउण्ड बढी हुने सम्भावना छ। उक्त अध्ययनअनुसार कम सुत्ने मानिसमा त्यस्तो सम्भावना ३० प्रतिशत बढी हुन्छ। नेशनल इस्टिच्युट अफ हेल्थले स्वस्थ शरीरका लागि ७ देखि ८ घन्टा सुत्न सिफारिस गरेको छ।
तपाईंको शरीरमा बढी वजन तिघ्रा वा कम्मरमा नभई मध्यम भागमा बढी छ भने तपाईंको शरीर स्याउ आकार हुन्छ। डा। कश्यपका अनुसार जिनबाट नै विकसित हुने त्यस्तो शरीर छ भने तपाईंलाई पेट घटाउन गार्हो पर्छ। असम्भव भने हुँदैन।
तपाईंको शरीरमा टेक्सटोसटोरोनको मात्रा ज्यादा छ भने पनि तपाईंलाई वजन घटाउन गार्हो पर्नछ। ‘तपाईं स्याउ आकारको हुनुहुन्छ र वजन धेरै छ भने एकपटक चिकित्सकको सल्लाह लिनु राम्रो हुन्छ,’ डा। कस्यप भन्छिन्, ‘तपाईंमा मधुमेह हुनुभन्दा अघिको अवस्था वा मधुमेह भइसकेको हुनसक्छ।’
के तपाईं पेटको बोसो घटाउन प्रतिबद्ध हुनुहुन्छरु ‘त्यसका निम्ति फाइबर र थोरै क्यालोरी भएका तथा चिनी र कार्बोहाइड्रेड थोरै भएका खानेकुरा खानुपर्छ। यति मात्र होइन, रक्तसञ्चार परिवर्तन गराउने र वजन घटाउने व्यायामको जरुरी पनि पर्छ,’ डा। कास्यप भन्छिन, ‘त्यसो हो भने जिनका कमजोरीलाई जितेर भए पनि तपाईंले शरीरको वजन घटाउन सक्नुहुन्छ।’
Post View Count: 85
अन्तराष्ट्रिय कलाकार मञ्च युरोप महाशाखाद्वारा जारी प्रेस बिज्ञप्ती
आफु मात्र कलाकार र अरु सबैलाई मानब तस्कर हुन् भन्दै दुई…
गगन थापाज्यू भारत र यूरोपियन युनियनले दिएको १० करोड खोई ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार…
छाप्रो मै उम्रिए जमरा, भूकम्पपीडितलाई आएन दसँै
भक्तपुर । भक्तपुरको कमलविनायक अस्थायी शिविरमा बस्दै आएकि रीता पोखाले पालभित्रै जमरा उमालेकी छन् ।
गत वर्षको वैशाख १२ गतेको…
बसको ठक्करबाट दुई गम्भीर घाइते
जितपुर । बसको ठक्करबाट कपिलवस्तुमा आज दुईजना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
वातारण संरक्षणमा वचन र कर्मले लागौँ : राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं । विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भावी पुस्ताका लागि…
उत्तर कोरियाको परमाणु परीक्षणपछि भूकम्प !
एजेन्सी । उत्तर कोरियामा ठुलो धक्का महसुस भएको छ । अमेरिकी…